संसारकै आमा : इन्दिरा राना मगर जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
संसारकै आमा : इन्दिरा राना मगर
मङ्गलबार १५ पुस, २०७१
विसं २०२७ सालमा झापाको शनिश्चरे–६ सालबारीमा प्रतापसिंह र मनमाया मगरकी कान्छी छोरी इन्दिरा रानामगर स्विडेनको ‘वल्र्डस चिल्डेन्स फाउन्डेसन’ ले दिने ‘वल्र्डस चिल्डेन प्राइज’ को बल्र्ड चिल्ड्रेन प्राइज २०१४ अनरी अवार्ड विजेता बन्न सफल हुनुभएको छ । इन्दिरा बन्दि अभिभावकका बालबालिकाको शिक्षादिक्षामा काम गर्ने ‘प्रिजनर्स एसिस्टेन्स नेपाल’ संस्थाकी अध्यक्ष हुन् ।
वल्र्ड चिल्ड्रेन्स् प्राइज–२०१४’ मा कसरी छनौट हुनुभो ?
मलाई पनि सुरुमा थाह थिएन । यो बालबालिकाको क्षेत्रमा ‘नोबल पुरस्कार ’जस्तै रहेछ । स्विडेनको वल्र्डस् चिल्ड्रेन्स प्राइज फाउन्डेसनका प्रतिनिधि केही महिना अघि नेपाल आएर दुई हप्तासम्म मेरो काम हेरेका थिए । त्यसको मूल्यांकन भएर होला, म छनौट भएछु ।
छनौट भएको कसरी थाहा पाउनुभो ?
म मनोनित भएपछि माइति नेपालमा खबर आएछ । यहाँको फोकल पर्सन जेनिथ गुरुङ भन्ने भाइ हुनुहुन्छ । उहाँहरुबाटै थाह पाएँ ।
तपाइको विगत जान्न मन लाग्यो, साँच्चै बाल्यकाल कसरी बित्यो ?
सानोमा मैले निकै दुःख पाएँ । म गरिब परिवारमा जन्मेँ । गरिबीले गर्दा खानलाउन समेत मुस्किल थियो । कहिलेकाहीं जंगलबाट खोजेर ल्याएका गिठा, भ्याकुर खाएर पेट भथ्र्यौ । सतार समुदायका बालबालिकासँग म खोलामा गँगटा र माछा मार्न पनि जाँन्थे । निगुरो टिपेर ४ आनामा बेच्थ्यौं । ज्यालामजदुरी गर्नुपथ्र्यो । ती दिन सम्झिदा अहिले पनि मन भकानिन्छ । वास्तवमा मेरो बाल्यकाल यति कठिन अवस्थामा बितेको थियो कि सबै भन्ने हो भने किताब बन्छ ।
उसो भए तपाइले सानोमा पढ्न पाउनुभएन ?
सँगैका साथी स्कुल जाँदा म गाइबाख्रा चराउन जंगल जान्थेँ । मनमा पढ्ने रहर भए पनि त्यो अवसर ११ वर्षको हुँदासम्म पाइन । त्यतिबेला गरिबका छोराछोरीले स्कुल पढ्नु भनेको आकाशको फल आँखा तरि मर भनेजस्तो थियो । अझ छोरीलाई स्कुल पठाउने त निकै गाह्रो थियो । हाम्रो समुदायमा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि कमै थियो । दाइ स्कुल जाँदा मलाई पनि जान रहर लाग्थ्यो । तर, मैले त्यो अवसर पाइन । मलाई पनि पढ्ने इच्छा जाग्यो । अनि दाईले लखेको देखेर घरमै पढ्न, लेख्न सिकेँ । गोठाला गएका बेला जमिनमा झिँजाले लेख्थेँ । हात र खुट्टाले पनि लेख्थेँ । यसरी मेरो पढ्ने इच्छा पूरा गरेँ ।
कसरी स्कुल जान सफल हुनुभयो ?
एक दिन शनिश्चरे माविका हेडमास्टर हस्त परियार हाम्रो घर आउनुभो । उहाँले सोधेपछि मैले स्कुल जान नपाएको सुनाएँ । त्यसपछि सरले केही कुरा सोध्नुभो । फटाफट उत्तर दिएपछि सरको मन पग्लिएछ । उहाँकै सहयोगमा म एकैचोटि ५ कक्षामा भर्ना भएँ । कक्षामा प्रथम भएँ । १६ वर्षमा एसएलसी पास गरेँ । क्याम्पस भर्ना हुन दमक आएँ । अभिभावक नभएकाले भर्ना गरिएन । म बेस्सरी रोएँ । त्यतिबेला न पैसा थियो, न क्याम्पस सम्म आमा, बुबा आउन अवास्था थियो । पछि सबै कुरा थाह पाएपछि सरहरुले भर्ना गर्दिए । छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे । त्यसपछि स्कुल हुँदै क्याम्पस पढ्ने धाको पूरा भयो ।
अनि काठमाडौं किन झर्नुभयो त ?
२०४७ सालमा बिए पढ्न भनेर झापाबाट काठमाडौं छिरेको हुँ । त्यतिबेला मसँग खासै पैसा पनि थिएन । स्कुल पढ्दा चिनेकी साथी मीना टाँक बनाउने कम्पनीमा काम गर्थिन । उनकै सहयोगमा टाँक बनाउने, कपडामा आइरन लगाउने काम पाएँ । थोरै रकम जम्मा गरेपछि पब्लिक युथ क्याम्पस भर्ना भएँ ।
बन्दी अभिभावका बालबालिकाको शिक्षादिक्षामा काम गर्ने जोश कसरी पलायो ?
टाँक बनाउने कम्पनीको कमाई खर्च नटरेपछि कतै राम्रो जागिर पाइन्छ कि भनेर पत्रिकामा छापिएका विज्ञापन हेर्थे । एक दिन ‘शिक्षक चाहियो’ भन्ने विज्ञापन देखेँ । म नर्स वा शिक्षक बन्न चहान्थे । नर्स बन्ने सपना पूरा नहुने भएपछि म शिक्षक बन्ने ध्यानमा लागेँ । पत्रिकामा दिएको स्कुल अमृत बोडिर्ङ खोज्दै नयाँबजार गएँ । अन्तवार्ता दिएपछि पास भएँ । सामाजिक र गणित विशय पढाउने भएँ ।
स्कुल नजिकै साहित्यकार पारिजात दिदी बस्नुहुँदो रैछ । दिदी त्यतिबेला मानवअधिकारवादी संस्था ह्युरनकी उपाध्यक्ष हुनुहुँदोरैछ । उहाँले जेल पुगेर बन्दीहरुको अवस्था बुझ्ने, उनीहरुको हक, अधिकारका पक्षमा बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो । मेरो संगत दिदीसँग हुँदै गयो । उहाँसँगै जेलमा जान्थे । दिदीले ह्युरनपछि पाम नामक संस्था खोल्नुभो । मानवअधिकार र जेलका बन्दीबारे काम गर्ने यस संस्थाको सदस्य भएँ । त्यसपछि नियमित बन्दीगृह जान थाले ।
केन्द्रीय कारागार गएर बन्दीहरुलाई पढाउन थालेँ । जेलमा बन्दीका बालबालिका पनि बन्दीजस्तै बस्नुपथ्र्यो । मलाई ती बालबालिका देखेर दया लाग्यो । आमाबुवाले गलत काम गरे पनि बालबालिकाले सजाया पाएजस्तो लाग्यो । बन्दिका छोराछोरी भन्ने बित्तिकै समाजले पनि हेला गरेको पाएँ । सडक बालक भनेपछि बरु सबैले माया गर्छन् । तर, बन्दीको बालबालिकालाई समाजबाट पनि तिरस्कार गर्ने । मेरो दिमागमा यहि कुरा खेल्यो । त्यसपछि मैले यसमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
त्यतिबेला बन्दीका बालबालिकालाई चिल्ड्रेन होमले पनि राख्दैनथे । हामीसँग पनि पैसा थिएन । पारिजात दिदीसँग भोलेन्टियर रुपमा काम गरेको थिए । टिउसन पढाएको पैसाले केही सहयोग गरे । त्यसपछि जेलर, प्रहरी अधिकृसँग कुरा गरेर जेलमा रहेका महिला र बच्चालाई पढाउन थालेँ । बिस्तारै, केही बच्चाहरुलाई जेलबाहिर ल्याएर पढाएँ । त्यसपछि यहि क्षेत्रमा काम गरिरहन मन लाग्यो । यसमै सन्तुष्टि पाउन थाले । म यहि काममा लागेर जीवन बिताउँछु । म थुप्रै बेसाहारा बच्चाबच्चीका आमा हुनुमै खुसी छु ।
यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेको कति वर्ष पुग्यो ?
पारिजात दिदीसँग काम सुरु गरेको २४ वर्ष बित्यो । त्यसपछि सन् २००० मा मैले स्थापना गरेको ‘प्रिजनर्स एसिस्टेन्स नेपाल’ लेस काम थालेको पनि १४ वर्ष भइसक्यो ।
अहिले बन्दिका कति बालबालिकालाई सहयोग गरिरहनुभएको छ ?
जेल परेका अभिभावकका सन्तानहरुको लालनपालन र शिक्षादीक्षामा करिब ४ सय बालबालिकाले सहयोग पाएका छन् । यीमध्ये २ सयजना बन्दीका सन्तान हुन् । तिनले पूर्ण सहयोग पाएका छन् । बाँकी २ सय बच्चा विपन्न परिवारका हुन् । तीनले आंशिक सहयोग पाउँछन् । म्याग्दी, कास्की, झापा र काठमाडौंका ३८ परिवारका सन्तानलाई ‘छोरी शिक्षा’ कार्यक्रमअन्तर्गत पढाइरहेका छौं ।
कस्तो कस्तो सहयोग गरिरहनुभएको छ ?
हामीले दुई दिनदेखीको बच्चालाई राखेको छौं । केही अघि सात महिनाको बच्चा ल्याएका छौं । काठमाडौं नयाँबजार, साँखु, पाल्पा र झापामा संस्थाले मुख्य काम गर्छ । साँखुमा ८६ बच्चा छन् । नयाँबजार डेरामा मसँगै २८ जना छन् । भक्तपुरमा युथ प्रोग्राम छ । त्यहाँ १४ जना छन् । पाल्पामा १५ जना छन् । झापामा १० बच्चा छन् । बालबालिकालाई पढाइसँगै सीपमूलक तालिम हस्तकला, फनिर्चर, थाङका, टेकिङ गाइड, पेन्टिङ्ग, कार्पेन्टर, माउन्टेन बाइक तालिम दिएर रोजगारी दिलाउने गरेका छौं । केहीले रोजगारी पनि पाएका छन् । आत्मनिर्भर बन्न र कम खर्चमा जीविकोपार्जन गर्न सिकाउन अर्गानिक फारम, साँखुमा बाख्रापालन धान, तरकारी, फलफूल खेती गरेको छौं । जहाँ बालबालिका आफैले पनि काम गर्छन् ।
तपाईले हुर्काएका बच्चा मध्ये कति पुनस्थापना भइसकेका छन् ?
देवी पुनले घोपा क्याम्पमा नर्सिङ पेसा गर्दैछिन् । उनका भाइ पनि म्यानेजर छन् । कोही बच्चा बेल्जियममा छन् । कोही टिचर छन् । उनीहरुले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । मैले पालेका २५ जतिले बच्चाबच्चि बनाएर राम्रो घरब्यवाहार चलाएका छन् ।
तपाईको पारिवारिक अवस्था कस्तो छ ?
मेरो दाम्पत्य जीवन अरुकोजस्तो सुखद छैन । मागी विवाह गरे पनि श्रीमान् र म अलग भएको १५ वर्ष भइसकेको छ । जेलमा परेका अभिभावकका सन्तानहरुलाई कोठामै ल्याएर पाल्न थालेपछि श्रीमानसँग द्वन्द्व चल्यो । ‘कि मलाई छोड कि यी बच्चाहरुलाई’ भन्ने श्रीमानको रुखो वचनले मन पोल्यो । मैले यी कलिला र दुःख पाएका बच्चाहरु छाड्न सकिन । बरु श्रीमान् छाडे । श्रीमान् नभए पनि म एक्लो छु भन्ने लाग्दैन । मेरो थुप्रै बच्चाहरु छन् । उनीहरुसँगै सुत्छु । नयाँबजारको कार्यालयमा १७ वर्सिया छोरी सुवानी छिन् । ८६ वर्सिया आमा र २८ जना बालबालिकासँग म रमाउँदै बसेकी छु ।
नेपालकैं यो ठाउँमा बाघले मान्छे खायो
पाँच दिनदेखि बेपत्ता महोत्तरीका एक व्यापारीको आजसम्म कुनै पत्ता लागेन
घाँस काट्न गएका २३ वर्षीय युवक राति अबेरसम्म घर नर्फिएपछि…
घरमा एक्लै बस्दै आएकी महिलाको लाश यस्तो अवस्थामा फेला पर्यो